Forum serasera malagasy Tsifahaizana teny vahiny - Dinika forum.serasera.org
Tsifahaizana teny vahiny
Fitohizan'ny hafatra : Tsifahaizana teny vahiny
Tibao - 09/08/2014 10:57
Efa nahita olona nanambanimbany olona tsy mahay teny vahiny ve ianareo? Rehefa mba mihaino radio gasy manko aho dia matetitetika mahaino dokam-barotra ho ana fianarana teny frantsay & anglisy. Izaho manokana tamin'ny mbola kely dia tsy nahay teny frantsay anefa tsy nahatsiaro tena ho voafilafila izany noho ny tsifahaizana teny, ka rehefa nifindra tety an-dafy ihany vao tena nahatsapa ilay tsifahaizana. Ahoana izany ry namana?
Nav - 20/04/2015 23:10
Teny kely atsipy. Ny teny moa dia fitaovana ampitana hevitra na hafatra na baikona fhetsem-po. Koa arak'ireo antony ireo (anagamba tsy dia feno ary mety tsy mazava) fany ahy dia raisiko ho toy ny fitaovana io, amin'ny endriny pratika misy ilàna azy.
Noho izany, na ny tenin'ny tena (ny teny malagasy) na teny vahiny rehefa hitanao fa ilaina dia tokony hianarana tsara satria tiana ho fantatr'ilay olona hiresahanao) ny hevitrao na ny tianao holazaina.
Raha izany àry, ohatra, teny vahiny inona no tokony hilofosantsika eto Madagasikara? Nohon'ny tontolo manodidina, ny firenena manodidina antsika dia miteny englisy daholo: Afrika Atsimo, Tanzania, Kenya, India, Australia ary ny tontolo eran-tany eo amin'ny siansa sy ny fandraharahana dia miteny englisy koa.
Fehiny: tokony hivadika hanome lanja ny teny englisy isika fa tsy hijanona ao amin'ny teny frantsay ary tokony hampiharina amin'ny lafiny rehetra izany.
Tibao - 21/04/2015 18:42
Teny kely atsipy. Ny teny moa dia fitaovana ampitana hevitra na hafatra na baikona fhetsem-po. Koa arak'ireo antony ireo (anagamba tsy dia feno ary mety tsy mazava) fany ahy dia raisiko ho toy ny fitaovana io, amin
Tibao - 21/04/2015 18:43
I Madagasikara no firenena frakôfôna be mponina indrindra ao amin'ny ilabolantany atsimo (tsy isaiko ato i Kongo satria voasaraky ny Fehibe). I Madagasikara ihany koa no tany be frantsay indrindra ao amin'ny ilabolantany atsimo.
Inona tokoa no mahatonga antsika mifikitra amin'ny teny frantsay anefa dia miteny anglisy daholo ny manodidina antsika? Heveriko fa ny antony ara-tantara no mahatonga izany.
Kanefa raha tia hianatra teny anglisy kosa dia tadiavina aiza ny mpampianatra? Etazonia, Angletera, Aostralia = lavitra loatra. India, Afrika atsimo, Maorisy, Kenia, Tanzania = Tsy teny anglisy no teny ifaneraserana amin'ny samy mpiray foko na mpiray tanindrazana. Iza amin'ireo koa no hanaiky hipetraka amina tany anisan'izay mahantra indrindra & tsy itenenana anglisy?
Ny hitako ankehitriny dia tsy maintsy mahay fiteny TELO (malagasy, frantsay, anglisy) (na DIMY mihitsy aza miaraka amin'ny teny portogey sy teny sinoa) farafahakeliny vao mahomby amin'ny fiainana. Ny mifehy teny vahiny IRAY aza efa mahasahirana ny ankamaroany ka ahoana ny telo?? Ny vahaolana hitan'ny ankamaroany (indrindra aty ivelany) dia mandao ny teny malagasy ary mianatra ny tenin'ny hafa. Lasa fofompofony fotsiny ilay hoe "andrianiko ny teniko, ny an'ny ahfa koa feheziko" :-(
Nav - 22/04/2015 11:05
Misaotra an'i Tibao nanohy ny adihevitra ary nanome vahaolana.
Marina ny tolokevitrao hoe: tenim-pirenena 3 no tsara ho fehezina (teny malagasy, frantsay sy englisy), ny fanontaniana anefa dia hoe iza io olona tondroina io? Ny manampahaizana, ny vahoaka sy ny valalabemandry sa ampahany iza amin'ny vahoaka?
Ny ahy dia ny manampahaizana no tondroiko eto, izaho manokana aloha tsy hitaky ny valalabemandry hianatra tenim-pirenena 3, ny farafahakeliny ary tsy maintsy anefa ho an'ny olom-pirenena tsotra antsoina hoe valalabemandry (fiteny maneso angamba izany) dia ny fahaizana ny tenim-pirenen'ny tena dia ny "Teny malagasy", ny andraikitr'ireomanampahaizana dia ny fandraisany andraikitra ho "tetezana" mampifandray ny mponina tsotra amin'ny tontolo moderna ilàna fahaizana sy fahalalàna teknolojika.
Ny antony dia aleo aloha isika samy malagasy hifanakalo hevitra sy hifampita hafatra, miankina amin'ny fahatokiana apetraka amin'ny "teny malagasy" anefa izany, azo atao izany RAHA ASIANA FANAMBOARANA NY TENY MALAGASY.
Raha mahay teny malagasy tsara ny Malagasy dia mora ho azy ny mamantatra ny lanjan'ny teny frantsay eo anivon'ny eran-tany ary manilika ny teny frantsay izay tena miendrika tenin'ny mpanjanatany ankehitriny (fantaronareo fa vao misy radio frantsay mitsangana eto Antananarivo izao vao haingana dia ny Radio France Madagascar, nefa efa misy RFI eto TNR sy amin'ny tanàna maro eto Mad.)
vahiny2004 - 22/04/2015 11:21
Tsy misy afaka manova ny tantara, tsy vaha-olana ny fankahalàna ny teny frantsay be fahatany satria hoe "tenin'ny mpanjanaka" ... toa te hiteny aho hoe "hambom-po diso toerana" ... Mila manaiky isika fa nanampy antsika t@ fisokafana t@ hafa koa ny teny frantsay t@ fotoana sasany .
Ho ahy tsy misy hoe ity no tsara na ity no tsara, fa hoe inona no tanjoko ,iza no hiarahako miasa ? Inona izany no teny tokony ho haiko mifanaraka @ io tanjoko io , teny sinoa , teny anglisy, teny japoney ...
Tibao - 22/04/2015 13:45
Tsy misy afaka manova ny tantara.
Na dia ho an'olon-tsotra tsy manam-pahaizana ary monina eto Madagasikara aza dia efa ilaina ny mahafehy teny vahiny IRAY farafaharatsiny raha:
Tia hampiasa solosaina, finday marani-tsaina (smartphone) (tsy mbola nahita tamin'ny teny gasy aho)
Tia hahazo asa tsara karama
Hivoaka any ivelan-tanindrazana
Hangataka fampahalalana eny amin'ny masoivoho vahiny
Hameno fôrmilera (tsy izy rehetra, fa ny ankamaroany) hisoratana anarana, na hampiditra ny ankizy eny am-pianarana.
Handoa faktiora amin'ny orinasa sasany
Hahalala ny antsipiriham-baovao any ivelam-pirenena
Voavaha daholo ireo olana ireo raha teny malagasy IRERY no fampiasa amin'ny fomba ofisialy eto Madagasikara ("andriano ny teninao").
Ho an'ny fifandraisana any ivelany dia vahaolana haharitra ary hanam-bokatra ho an'i Madagasikara ny fianaran'ny vahoaka teny anglisy: Etazonia, Vondrona Eoropeanina, Afrika atsinanana & atsimo), India dia firenena ahafahana mifanerasera amin'ny teny anglisy avokoa; ireo firenena ao Afrika andrefana dia mifanerasera amin'ny teny frantsay.
Soratana amin'ny teny anglisy ireo lahatsoratra siantifika avo lenta ary natao ho fantatry ny mpikaroka rehetra ireo, na aiza na aiza no misy anao ("ny an'ny hafa koa fehezo").
Tibao - 22/04/2015 14:55
Noho ny tranga fito nolazaiko tamin'ny hafatro farany teo dia azo lazaina fa, ankehitriny, dia TSY ahafahan'ny be sy ny maro mampiasa ny teknolojia ankehitriny (ary ny fahamoram-piainana entin'izany teknolojia izany) ary tsy ahafahan'ny malagasy manohy ny fiainany mandavanandro ny fampiasana ny teny malagasy IRERY.
Ny raiamandreniko dia nilaza tamiko fa tsy nilaina ny "mandany fotoana mianatra manoratra tsara ny teny malagasy". Kanjo "nandany" ilay fotoana ihany aho, dia izao no vokany. Ka mipetraka ny fanontaniana:
Vendrana ve ireo raiamandreny mandany vola efa ho an-tapitrisany mba hampiditra ny
zanany any amin'ny sekoly miteny frantsay, anglisy, na [apetraho eto izay teny vahiny fantatrao] ?
Inona ny antony tsy nanovana ny abidy malagasy tamin'ny Fanagasiana?
Vendrana ihany koa ve, ireo tranonkala malagasy tsy mampiasa teny malagasy (orange.mg, moov.mg, anefa dia natao ho an'ny mpanjifa malagasy?
Raha jerena ny any ivelany dia efa nitranga manko ny fampiharana abidy vaovao (teny malay/indonezianina amin'ny 1972). Ka RAHA tsy misy ezaka avy amin'ny tsirairay ary ny Fanjakana: na amin'ny fampiharana ny fiovana; na amin'ny fitakiana ny tranonkala malagasy ho azo vakiana amin'ny teny malagasy; na amin'ny alalan'ny fanesorana ny teny frantsay amin'ny lisitry ny teny ofisialy; dia :
Tsy hivoatra ny fampiasana malagasy : tsi-fampiasana ny teny amin'ny taranja ary amin'ny siansa maoderina.
Tsy hianatra teny malagasy intsony ny taranaka satria tsy hitondra azy na aiza na aiza intsony izany fahaizana izany, na mba tsy ho voaesoeson'ny hafa mieboebo noho ny fahaizany teny vahiny.
eduardobr61 - 09/10/2016 22:14
Izaho dia mandrisika https://www.penpaland.com teny fifanakalozana ara tranonkala